Zvemagariro Midhiya Pundits ari Kuparadza Corporate Social Media | Martech Zone
Zvemagariro Midhiya Pundits ari Kuparadza Corporate Social Media
Svondo, Kukadzi 8, 2015 China, June 18, 2015 Douglas Karr
Wati wambokanganisa pasocial media here? Ndakagadzira akati wandei (uye ramba ndichivaita). Kwete makuru akakanganisa, asi blunders hapana zvishoma. Ndataura zvisinganzwisisike zvingadai zvakadzivirirwa. Ndakatsoropodza vanhu vandairemekedza saka vanofunga kuti ndiri bhatani. Ini ndinogovana zvematongerwo enyika - iyo inoera tsvene yemagariro enhau blunders Ini zvakare ndinosanganisa bhizinesi uye mafaro mune angu ese emakambani uye eangu maakaundi.
Ndinofanira kuyamwa pasocial media.
Iwe unofunga… asi ini ndine hutano hwakanaka hunotevera uye hushamwari hutsva hwakagadzirwa uye hukama hwebhizinesi mazuva ese. Kune vanopa mazano, ndiri kuita zvese zvisirizvo… Asi iri kushanda. Uye kunyange mutorwa, iwo mazano ayo DK New Media deploys emakambani ari kugadzira yakanaka inodzoka pane inivhesitimendi. Chinhu icho vamwe vezvenhau vezvenhau vanodzivisa.
Ini ndanyora kare nezve kujeka maringe neuchokwadi saka ini handisi kurova bhiza rakafa pano (uh-oh… usashevedze PETA). Asi ini ndinogumbuka chaizvo pandinoona wezvemagariro murairidzi achitora kambani kuita basa rekukanganisa kusingadi.
Iyo yazvino nyonganiso ndeye Coca-Cola. Vakagadzira Twitter bot yavo #MakeItHappy mushandirapamwe, uchitsanangura chinangwa chayo mukuburitswa kwenhau:
Tackle iyo inopararira negativity inosvibisa yemagariro midhiya uye mafomu ekutaura pane iyo internet
Wow… mubatanidzwa uri kuyedza kuunza mufaro mushoma pasi. Chokwadi chaive chiitiko chekumaka saka pane zvishoma zvekushambadzira pazviri. Asi yanga iri nzira yekumaka yaCoke kwemakumi emakore… zvionekwe pane zviyeuchidzo zvakanaka. Zvinotyisa, handiti?
Zvakanaka, Gawker's Adam Pas, akagadzira Twitter bot kune mitsetse yeTweet kubva kuna Adolf Hitler's Mein Kampf uye inosangana navo ne #MakeItHappy tag. Sangano rakashanda. Izvo zvakakonzera bot raCoca-Cola kutepfenyura zvinyorwa zvaHitler uye kugadzira mapikicha akanaka ne #MakeItHappy tag kwemaawa mashoma.
Gawker akatumira iyo stunt uye neInternet yakazvida. Coke rakaburutsa bot.
Chii chakazoitika? Masocial media pundits akarova Coca-Cola nekuda kwavo kutadza midhiya. Ndakaiverenga mune yangu yese yekudya - iyo izere neshamwari uye vatinoshanda navo vanobvunza makambani pane avo ezvehukama enhau mazano. Tsvaga #MakeItHappy uye Twitter uye iwe uchaona zvandiri kureva. Zvakakomba… vakaapwanya.
Gore rakapfuura, ndakaita hurukuro kuSocial Media Marketing World kwandakanyora zvese zvakakura zvemagariro ezvehupfumi zvakanyorwa pamasaiti emabhizimusi uye ndakaratidza kuti hapana kana imwe chete inokanganisa zita. Zvakakomba - kwete kana imwe chete!
Makambani anotya zvinokuvadza zvemagariro midhiya. Iwe unoziva nei vachitya zvemagariro midhiya kukanganisa? Nekuti wese wezvemagariro murairidzi kunze uko anozvidza vashandi vavo uye wechipiri-fungidziro yega zano ravanoshandisa iro rinoguma nekukanganisa. Haisi mhedzisiro yemushandirapamwe iyi inokuvadza mukurumbira wekambani, ipepanhau rinoburitswa nevanoona nezvezvenhau kunyadzisa kupenga kwavo.
Coca-Cola haana chaakaita zvakaipa nemushandirapamwe wavo weTob bot uyo waifanirwa nemabatirwo avakaitwa nemapundits. Kana iwe uchida kutora chero munhu kuti aite basa, tora Gawker kuti uite. IMO, Adam Pash ndiye dick wekushandisa zvisirizvo mushandirapamwe uye Gawker yekuzvirova dundundu nezvazvo kuti vatambe gotcha seboka revachiri kuyaruka. Ini ndinogona kungofungidzira ivo vachiseka senge yekutanga quote yaHitler yakazviita kuCoke's Twitter feed.
Hei Gawker… kura.
Zano Rangu Kumakambani
Yasvika nguva yekuti iwe uende pane zvinogumbura neichi crap. Dzivirira maraki ako, gadzirisa marongero ako, uye enda mberi. Shanduko inoshamisa kushambadziro uye midhiya yakaunzwa pasocial media ndiko kugona kwedu kuti titaurirane zvakananga kune zvigadzirwa. Nyika iri kukumbira kuve pachena uye kutarisa mukati memasangano avanoshanda nawo kuitira kuti vanzwe zvakanaka kuti mari yavari kushandisa yakakosha. Nekujeka kunouya nenjodzi, zvakadaro. Uchaita zvikanganiso. Uye izvo zvakanaka!
Iwe haugone kufanotaura kuti imwe dick iri kuzobira yako inofara yemagariro nhimbe neHitler makotesheni kunyangwe ukaedza zvakadii. Kuva pachena kunoreva kuti uri panjodzi yemamiriro ezvinhu akadai, asi sekugadzira kwawakaita zano rekuita mushandirapamwe, unogona kugadzira zano rekuti zvinhu zvikashata.
Ndingadai ndakada kuona mhinduro yeruzhinji kubva kuCoke iyo yakaudza nyika kuti zviito zvaGawker ndizvo chaizvo zvaiitwa nemushandirapamwe wavo. Ini ndaigona kuratidza kusuwa kuti kambani yemidhiya yaizoenda kune dzakaderera kudaro kunonyadzisa maraki. Ini ndaizotora pasi mushandirapamwe ndobvunza vanhu kuti vanyore Gawker vataure kusuwa kwavo futi.
Pane zvemagariro midhiya zvikanganiso kuti makambani anokwanisa kudzivirira, asi kutadza kunzvenga hasha dzemapenzi paInternet haisi imwe yadzo.
Zano Rangu kuSocial Media Pundits
Paunotora mhando kuti uite seizvi, urikuparadza yako yega indasitiri. Kuvhunduka kwako-kutya uye kuzivisa kwekuti marangi akakwidzwa sei haasi kukubatsira. Iri kutyaira makambani akawandisa kuti arege kujekesa uye adzokere kunovanda kuseri kwemalogo, masirogani uye kushambadzira kweimwe-nzira.
Dai ini ndaive hombe brand ini chokwadi ndisina chokwadi kana ndaizomboshanda pamwe neyemagariro midhiya mupangamazano akasvetukira pane bandwagon kunyadzisa kambani online. Zvemagariro midhiya anoshanda akanakisa makambani akasununguka kutaurirana nevazhinji, kwete kana vachifanirwa kugara mumakamuri emabhodhi vachitamba zvese zvakasarudzika vachitya inotevera blog post iwe yaunonyora kana zvinhu zvikaenda zvisizvo. Zvimise.
Regedza kutengesa masevhisi ako nekutya uye kutengesa, pachinzvimbo, pane chivimbiso chekuti makambani anogona sei kushandura maraki avo uye kuvaka nharaunda nevatengi vavo.
Tags: Adam Pascoca-colacokegawkermakeithappyvenhau vezvenhau varairidzizvemagariro midhiya zvikanganisomagariro enhau punditstwitter bot
Yekupedzisira Nhungamiro yekutarisa Mbiri Yako Pamhepo
Simbisa Yako Yemagariro Media Kufuridzira ne Unmetric's Smart Dhata Turu
Zvizere unobvumirana newe pano. Gawker ndiye jerk kwete Coke. Ehezve, kushandira Gawker kunogona kuva chirango pachako.
Chinyorwa chikuru. Ini ndinoda graphic - chese chinhu chinowedzerwa chidimbu chekubata chinofanira kutaurirana pasina izwi rakanyorwa. Bravo.
Ini ndinofungidzira rimwe rematambudziko ehukama enhau kupatsanurwa, ndiko kuti pane kushambadzira, tekinoroji, dhizaini, kunyora, uye zvichingodaro; ese akaparadzaniswa zvinhu zvekutaurirana munharaunda yeruzivo muhucheche hwayo.
Mushandirapamwe weCoke unopa paradigm inonakidza, asi semunhu akapfeka ngowani dzakawanda kwazvo mundima yekutaurirana, kusanganisira mugari tekinoroji, ndinogona kupupurira chokwadi chimwe chete kana ndichikwikwidzana nevemagariro venhau mhuka yekuremerwa: usambo, gadziriro yako yekutaurirana mushandirapamwe. Uri kuvasiya vachivhura. Iyo yakafanana nedhijitari yekuenda kuhondo usina bara-proof vest - mwero wekukuvara uchave wakakwira kana uine chimiro chepamusoro. IYO Indaneti, mushure mezvose: Asingazivikanwe, iyo Syrian Elektroniki Mauto, Lizard Squad, ese mapoka evabati dzimwe nguva anotarisana nemakomisheni emakambani. Izvi zvakangoitika kuti zvakabva kune mweya weghishi kuGawker.
Uyezve, zveshuwa, pane iyo Bill Cosby yemagariro midhiya fiasco. Wow.
Kuvadzingirira, zvakadaro, zvakafanana nekupa mhosva imbwa yekupinda mugaba remarara ekicheni: iri muchimiro chavo. Uye kana iwe ukasiya muvharo kubva pagaba, zvakanaka - zvinosuwisa (uye ndinoreva kuti nemoyo wese - hazvifanirwe kunge zviri nenzira iyi, asi ndizvo), ndizvo zvaunowana: nyonganiso. Zvakadaro, izvo zvese dzidzo. Paunenge iwe uchinge waziva chimiro chechimwe chinhu, uchave unonzwisisa zvirinani maitiro ekugadzirisa nazvo mune ramangwana. Zvichida zvirinani kurongedza mushandirapamwe ne-bullet-proof vest (kudzikisira fananidzo) uye kuitenderedza nevanhu (hongu, izvo zvinowanzove zvakavakirwa-mukati nyaya dzevashandi, ipapo).
Iweti inonamira, uyu mugero. Siya kuvhura uye iwe unokurumidza kuwana mumwe munhu aine dhijitari bara ine zita rechiratidzo pairi, kumwe kukuvara kweInternet, imwe yambiro yenyaya yekutaurirana.
Ndatenda nekundigonesa kufunga mamwe mageometri emamiriro ezvinhu aya nechinyorwa chako.
Kukadzi 9, 2015 na1: 41 PM
Great post! Ndatenda!
Kukadzi 9, 2015 na2: 10 PM
Iko kutora kunozorodza - wow! #ShameonYaGawker
Ichokwadi kuti nepo vezvenhau gurus vanotsigira hunhu hwechokwadi uye pachena, ivo vanopokana zvakanyanya nemusoro wenyaya chero une nharo - ndinoziva kuti ndinobva kure nenyaya dzakadai, saka kudos kune mumwe munhu akaita sewe kumira pane zvaunotenda # KUSVIRA
Kukadzi 9, 2015 na5: 00 PM
Zvakanaka kutumira, ndiri kuda kuona zvaunofunga nezve ichi chidiki chinowedzera kubva kuGawker.
Kukadzi 9, 2015 na8: 12 PM
Ini ndinofunga Gawker ndeye shitty brand iyo isiri yako shamwari. 🙂